Prachanda’s Election – Win at any cost | SuperNepal
Prachanda’s Election – Win at any cost
Uploaded by admin on November 17, 2013 at 8:18 pm
“हारियो भने बरबाद हुन्छ।” “साम, दान, दण्ड, भेद – जे जे गरेर हुन्छ जित्ने हो।” (कीर्तिपूर-१० मा प्रचण्डको गोप्य कार्यकर्ता भेला सम्बोधन, २९ कार्तिक)
Reminiscent of his Shaktikhore speech5years ago, Prachanda directs his cadres to win the Election at any cost – साम, दाम, दण्ड, भेद in his own words.
हामी फेरि पनि लडाइँमै छौं, कामरेडहरु। र यो लड़ाई हामीले जित्नै पर्ने स्थिति छ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बढ़ो जोड़ दिएर भनेको थिएँ र हाम्रो केन्द्रिय समितिको बिस्तारित बैठक जुरुक्क उठिकै हो, त्यो बिस्तारित बैठकको हल जुरुक्कै उठ्यो कि हामीलाई हारको छूटनै छैन। हामी हार्नु भनेको दुर्घटनामा यो देश जानु हो, सारा चीज बर्बाद हुने स्थिति छ फेरि। हामी हरहालतमा जित्नै पर्छ। अहिले पनि हामी लड़ाईमै छौं कामरेडहरु। तपाइँ-हामीले यो संबिधानसभाको निर्बाचनको लड़ाई जित्नै पर्छ, हार्ने हामीलाई छूट छँदै छैन। हारियो भने बरबाद हुन्छ। यहाँ अहिले यो उम्मेदवार कि त्यों उम्मीदवार छोडिदिनुस। जोसुकै होस हाम्रो पार्टीले जित्नु पर्छ। हामीले जिताउनै पर्छ। जितेनौ भने बर्बाद हुन्छ, त्यसैले अरु सबै कुरा छोडेर, र म फेरी दोहोर्याएर भन्छु, सबै कुरा छोडेर हामीले जित्नमा ध्यान दिनुपर्यो चार गते सम्म। साम, दाम, दण्ड, भेद – जे जे गरेर हुन्छ जित्ने हो। यो कुरा बिचार गर्नुहोला नेतृत्वका कामरेडहरु, जित्नपर्छ जे गरेर भएपनि जित्नु पर्छ। …………………… दस नम्बर छेत्रमा हाम्रो घट्यो भने चाहीं राम्रो कुरा हुँदैन हेर्नुस। त्यों म्यासेज रियाक्शनरी हरुले, देश भित्रकाले र बाहिरकाले पनि जे होस पार्टीको लोकप्रियता घटेकै छ , नेतृत्वको लोकप्रियता घटेकै छ, हामी पहिला लडेको ठाउँमा फेरी लड्दा भोट घट्यो भने…………….
Tags: election 2070, prachanda, prachanda election scandal, prachanda election speech, prachanda kirtipur speech, prachanda scandal, Puspa Kamal Dahal